Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. ‘सिन्दुर भर्न देऊ’ – Janata Live
‘सिन्दुर भर्न देऊ’
आखिर मलाई झुक्याएर अर्कैसँग चली !
हजुर मान्छे रैछ छली,
यो चर्चित गीत वि.सं. २०७१ बाट गल्लीगल्लीमा गुञ्जिएको सुन्न पाइन्छ । यो गीत प्रकाश तिम्सिनाले गाएका हुन् । उनी पनि मेनुकाजस्तै दृष्टिविहिन छन् । नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रमा आएका नवप्रतिभामध्ये प्रकाश सम्भावना बोकेका प्रतिभा मानिन्छन् ।
प्रिय तिम्रो सिँउदोमा, आखिर मलाई झुक्याएरजस्ता प्रकाशका गीत आम स्रोतादर्शकले गुनगुनाउँदै हिँडे पनि गायक ‘वाच’ गरका छैनन् । उखान छ हिन्दीमा, ‘आम खाओ पेड मत गिनो ।’ यस्तै पारा छ उनको ।
प्रकाशको प्रतिभाको अलग पाटो पनि छ । उनी चिनिया, जापानी, कोरियन, हिन्दी, अंग्रेजी, बंगाली र नेपालीलगायत भाषामा गीत गाउन सक्छन् । कर्ली कपाल पाल्ने प्रकाशको हातमा सेतो छडी र आँखामा कालो चस्मा कहिले छुट्दैन ।
वि.सं. २०४४ साल वैशाख १ गते सुनसरी, कोशीमा जन्मिएका हुन् प्रकाश । ०४५ भाद्र ५ गते गएको भुकम्पले कोशीमा आएको बाढीमा पुरै परिवारको साथमा बग्न पुगे । त्यही बाढीले प्रकाशको आँखाको ‘प्रकाश’ भने आफुसंँगै बगाएर लग्यो । सधैँको लागि । बग्दाबग्दै प्रकाश भने माझीको जालमा परे । संयागले ती माझी प्रकाशका मित बुबा रहेछन् । जालबाट उनले पुर्नजन्म प्राप्त गरे । अफसोच के रह्यो भने, उनले संयोगले भेटेको संसार आफैँले हेर्न पाएनन् ।
भुँइचालो बाढीजस्ता दुःखका पिरामिड टेकेर उभिएको यिनको जीवनका सुरुवाती वर्ष कुनै सिनेमाको दृष्यझैं लाग्छन् ।
प्रकाशकी हजुरआमा देवीमाया तिम्सिना त्यस घटनाको ठीक अगिल्लो दिन कोशी अञ्चल अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । त्यही भएर उनी बगिनन् । मित बुबाले उनै हजुरआमाको जिम्मा लगाइदिए प्रकाशलाई । प्रकाश भन्छन्, ‘यी सम्पूर्ण दृष्य सम्झिँदा मन चिसो हुन्छ, मितबाबुको जालबाट पुर्नजन्म प्राप्त गरेँ ।’
जीवनमा अनेकौँ उतार चढाब आए । आइरहे । बाढीमा बगे । माझीले निकाले । पुनः बसाइँ सरे । लेटाङ पुगे । धनकुटा गए । त्यसपछि काठमाडौँ आए । ०६४ सालमा साउथ एसियन स्टार जिते । ०६७ मा हजुरआमा गुमाए । अहिले विवाहको अन्तिम तयारीमा छन् ।
वि.सं. ०६५ मा पहिलो एल्वम निकाले । दिव्यदृष्टि नाममा । उनले एल्वमको सारा खर्च जोहो गर्नु अक्करको भिरको यात्रासरह थियो । यस्तो भिर फोरिदिए टंक सिटौलाले । यात्रा सजिलो बनाइदिए । संगीतमा उसै पनि त्रिवेणी हुन्छ । त्यसमा संगीततर्फ काँध थापिदिए राहुल प्रधानले । लेखनी भने राजाराम ढकालको रह्यो । यसरी तयार भयो ‘दिव्यदृष्टि’ । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शितल निवासमै यस एल्वमको विमोचन गरेका थिए । त्यही एल्वमले दर्शक श्रोतामाझ उठबस बढायो उनको ।
त्यसै कलाले उनलाई कालिका म्युजिक अवार्ड ०६६ मा दिलायो । सोही वर्ष अन्नपूर्ण म्युजिक अवार्ड दिलायो । वि.सं. ०६७ मा इमेज अवार्ड दिलायो ।
वि.स. ०५३ सालमा धनकुटा उक्लिए र सिदुवामा रहेको विद्यालय श्राी सरस्वती उमाविमा भर्ना भए । करिब तीन महिनामै ब्रेल सिकेपछि उनी कक्षा १ मा भर्ना भएर अध्ययन सुरु गरे ।
पूर्वमा धेरैको सपनाको शहर थियो धरान । एकजना लिम्बुनी दिदी ‘ऐसेलु माइली’को घरमा काम गरेर जेनतेन जिन्दगी चलाए । ०४७ सालतिर कुनै लाहुरेको घरमा विवाह भएको बेला प्रकाशले क्यासेट सुने । त्यसपछि प्रकाशको जीवनमा संगीत प्रवेश गर्न पुग्यो । त्यसपछि भने प्रायः उनी अडियो सुन्न छुटाउँदैनथे । उनलाई क्यासेट सुन्ने लत बस्यो । कपी गर्दै गाउने बानी पनि पर्न थाल्यो । उनको जीवनमा गीत प्रवेश भएपछि पुरिएका आँखा हृदयबाट खुल्दै गए ।
प्रकाश जब ९ वर्षका भए तब मात्र थाहा पाए, क्यासेटले गाएको त गीत पो रहेछ । गीत मान्छेले गाउने रहेछ । त्यसपछि उनमा गीत गाउने मान्छे बन्छु भन्ने सुर चढ्यो । हजुरआमाको छत्रछायामा हुर्किरहेका उनी गरिबीको चरम मारमा थिए । प्रकाशको जीवनमा शिक्षा भन्ने विषयलाई पेटको संघर्षले पछि सारिदियो । स्कुलसम्म पुग्न उनलाई ९ वर्षको उमेरसम्म अल्मलिनुप¥यो ।
प्रिय तिम्रो सिँउदोमा सिन्दुर भर्न देऊ
तिमी मेरी प्रियसी, सधैँ माया गर्न देऊ ।
निकै वर्ष भयो उनले प्रेयसीलाई यसो भन्न थालेको । आजसम्म प्रियसीलाई सिन्दुर भर्न देऊ भनिरहेका छन् उनी । झ्यांगिइरहेको छ अहिले उनको प्रेम । उनी प्रेम सम्बन्धलाई विवाहको रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । ‘प्रेमिका र विवाहका सम्बन्धका म छिट्टै नै सरप्राइज दिनेछु,’ प्रकाश भन्छन् ।
हङ्कङ, कोरिया, इजरायल, दुबई, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्चुगललगायत देशहरूको भ्रमण गरिसकेका छन् । भर्खरै जापानिज भाषामा गाउने विदेशीको गायन प्रतियोगिता ‘काइकोजिन’मा भाग लिएर आए । उनी यतिखेर आफ्नो नाम गिनिज बुकमा लेखाउने योजनासहित तयारी गरिरहेका छन् । स्पेनका एकजना गायकले विश्वका २० भाषामा गीत गाएर रेकर्ड राखेका रहेछन्, उनी भने २१ वा त्योभन्दा बढी भाषामा गीत गाएर रेकर्ड राख्ने लक्ष्यसहित तयारी गरिरहेका रहेका छन् ।
युट्युबमा उनको अर्को एउटा निकै चर्चित गीत छ । यस गीतलाई धेरै अगाडि उदितनारायण झाले गाएका पनि थिए । उनले यस गीतलाई रिमेक गरेका हुन् ।
तिमीलाई देखेर आँखा त्यहीँ छोडी हिँडे म
यो गीत र गायकीले सबैलाई लोभ्याउँछ । स्वयं गायकले भने पुरै संसारलाई मनको आँखाले मात्र देखेका छन् । आजीवन । अँ साँच्चि ! खै कसलाई देखेर उनले आँखा एक वर्षमै छोडेर आए ?
‘दीपालाई क्षमा दिनुहोला’
काठमाडौं, २ साउन । नायक राजेश हमालले आफ्ना फ्यान समक्ष हाँस्य कलाकार तथा निर्देशक दीपा श्री निरौलालाई क्षमा दिन विनम्रतापूर्वक...
दीपाश्रीलाई क्षमा दिन आग्रह गर्दै मध्यरातमा फेसबुक लाइभ आए राजेश हमाल
काठमाडौँ । कलाकार तथा निर्देशक दीपा श्री निरौला यतिबेला राजेश हमालको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका कारण विवादमा तानिएकी छिन्...
सुशान्तकी म्यानेजरलाई गर्भवती बनाएर आत्मह’त्या गर्न बा’ध्य पारेको आ’रोपमाथि सुरजले भने, ‘दिशालाई कहिल्यै भे’टेकै छैन’
एजेन्सी । केही वर्षअघि नायिका जिया खानको मृ'त्युपछि वि'वादमा घेरिएका सुरज पंचोली एकपटक पुनः वि'वादित बनेका छन् । सुशान्त र...
नायक सुरज पंचोलीमाथि सुशान्त सिंहको ह’त्या गरेको आरोप: पिता आदित्यले भने, ‘यो के पागलपन हो ?’
सुशान्त सिंह राजपूत आत्मह'त्या मामिलामा थुप्रै थ्योरी सोसल मिडियामा भा'इरल भइरहेको छ । तिनैमध्ये एकमा आदित्य पंचोलीका छोरा सुरजमाथि सुशान्तको...
एजेन्सी । भारतकी चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानको बिहीबार८ अबेर राती कार्डियक अरेस्टका कारण निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका...
संसारकै सुन्दर नर्स : अस्पतालमा हुन्छ उपचार गर्न आउनेको घुँइचो (फोटो फिचर)
एजेन्सी– ताइवानी एक नर्सका तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । २३ वर्षीया नर्स केरीना लिनले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाएकी...
हिमानी शाहको बैंककको तीनवटा भाईरल टिकटक (भिडियोसहित)
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह अहिले फरक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएकी छिन् । हिमानी शाह र उनकी छोरी पूर्णिका शाह पनि लकडाउनको...
हिमानी शाहको अर्को टिकटक ‘डान्स’ पनि भाईरल (भिडियोसहित)
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह अहिले फरक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएकी छिन् । उनी अहिले आफ्ना छोरीहरुसंग टिकटक भिडियो मार्फत् रमाईरहेको देखिन्छ...